Home Wararka Maanta oo laga ciidayo deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab
Maanta oo laga ciidayo deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab
Maanta waxaa laga Ciidayaa deegaanada ay Soomaaliya ka maamulaan kooxda Al-Shabaab ee bartamaha iyo koonfurta dalka. War xalay ka soo baxay Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahinta taageerta ayaa lagu iclaamiyey in Arbacada maanta ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga.
Ururka Alshabaab ayaa waxa ay sheegeen in gelinkii dambe ee Talaadada la arkay bisha Soonfur ee Shawaal. Al-Shabaab waxa ay sheegeen in illaa 8-qof oo ku kala sugan gobollada Hiiraan, Gedo, Bay iyo Bakool ay xaqiijiyeen inay arkeen bisha Soonfur oo dhalatay.
Dhanka kale Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay shaaciyey in dalka Soomaaliya aysan Arbacada maanta ah u aheyn maalin Ciid, isla markaana la kaamilayo 30-ka bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa dhankeeda xalay fiidkii hore xaqiijisay in Arbacada maanta ay tahay maalinta u dambeysa ee bisha Soon, maadaama shalay galabta la arki waayey bilashada bisha Soonfur ee Shawaal.